Julong - စက်, ပန်းကန်တွေညှပ်စက်, Bende စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း plasma
ဖောက်သည်အလုပ် site ကို
Jiangsu Julong CNC စက် Tool ကို Co. , Ltd
နာမည်ကျော် "ပြားတွေညှပ်စက်၏မြို့" တွင်တည်ရှိသည် - Libao မြို့, Haian ကောင်တီလွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လှပသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ။
Jiangsu Julong CNC စက် Tool ကို Co. , Ltd မှအထူးပန်းကန်မှေးကိုစက်ဌာနတက်သတ်မှတ်နှင့်စက်ဌာနကွေး, aftermarket ထုတ်ကုန်မေတ္တာရပ်ခံနှင့်အခါအားလျော်စွာဖောက်သည်သွားရောက်လေ့လာသမျှထောက်ပံ့ငွေများအတွက်ချက်ချင်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအတွက်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်တစ်နှစ်အာမခံနှင့်တစ်သက်တာထေူ၏။ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန် 20 ကျော်ပြည်နယ်များ, မြို့ကြီးများနှင့်မြူနီစီပယ်ရောင်းချခဲ့ကြနှင့်သောအသုံးပြုသူများကိုအားဖြင့်စုံစမ်းပြီ: အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. ကောင်းသော, သူတို့ကတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်, အလွန်အမင်းသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနှင့်တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ "သွားကြဖို့ကြိုးစားနေ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝိညာဉျကိုအပေါ်ထားခြင်းအားဖြင့် ...
w12 4-ကြိတ်စက်ပန်းကန်ကိုလှိမ့ ...
w11 အထက်ပိုင်း roller တစ်လောကလုံး ...
J23 အမျိုးအစားလေဖြတ်ချိန်ညှိ ...
ဝန်ဆောင်မှု - ကောင်းသောစေရန်, မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်
ကုမ္ပဏီဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ "သုညအကွာအဝေး" နားလည်သဘောပေါက်, တစ်နိုင်ငံလုံးစျေးကွက်ရှစ်ပေးပို့နျဌာနခှဲထူထောင် 110 တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းကုမ္ပဏီရှိပါတယ်။ ဥရောပမှာတော့အမေရိက, အိန္ဒိယ, တောင်အာဖရိက, အရှေ့တောင်အာရှ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများကမ္ဘာကြီးကိုထွက်ရောက်ရှိရန်, မျိုးစုံဖြန့်ဝေ "node များ" ကို set up!
ကြာသပတေးနေ့, 01 ဖေဖော်ဝါရီလ 2018
Add: Libao စက်မှုပန်းခြံ, Haian မြို့, Jiangsu ပြည်နယ်
လွှတ်တော်အမတ်: +86 183 6794 1888
ဖက်စ်: + 86-513-88289860